Ukunqongophala kwe-chip kuya kuhlala ubuncinci kude kube phakathi ku-2022 Ndisuka mac
Sele sikuxelela ukuba iinkampani ezijongene nokwenza iichips baneengxaki zokubonelelaKe ngoko, kukho ukulibaziseka ekwenziweni kwezi chips kwaye ke iinkampani ezizifunayo ziqala ukukhathazeka ngokungabinazo izixhobo zokusebenza kwazo. Amaxabiso azonyuka kungekudala.
Nanini na xa besikwazisa ngokunqongophala kweetshipsi, esinye seziphumo ezinokwenzeka kukunyuka kwamaxabiso ezixhobo zetekhnoloji, umzekelo iiMacs.Nanjengoko zingenawo amandla okubandakanya ezi chips, azinakho ukwaziswa ukuthengisa iimodeli ezintsha njalo Amaxesha okuhambisa aya kuba makhulu kunye namaxabiso aya kunyuka njengoko iinkampani ziya kuba nentengiso encinci yokuqikelela.
Le meko sisifo sezixhobo zeteknoloji. Intsholongwane ayinakukucothisa ukubanako kwabo ukuvelisa okanye ukusebenza, kodwa ukunqongophala kwezinto zezinto ezinokubacotha. Iinkampani ezongamele ukuvelisa ezi chip ziyalumkisa ukuba ukungabikho kwazo kunokwenzeka okuhlala kude kube phakathi ku-2022.
Ukunqongophala kweetshipsi kubangela ukuvalwa kwezityalo zezithuthi kunye nokuphononongwa ngokutsha kwezicwangciso zokuphehlelelwa ngabenzi be-smartphone. I-GlobalFoundries, isiseko sesithathu ngobukhulu besiseko se-chip, ithe icwangcise ukutyala imali $ 1.400 yezigidigidi ukwandisa amandla emveliso kumzamo wokujongana nengxaki eya kuhlala kude kube ngu-2022.
Kukho imiqondiso yokuba I-Apple isenokungaboni okona kunqongophala. Ngapha koko, abanye abahlalutyi bakholelwa ukuba ifuthe lale meko linokunceda i-apile, kodwa kungekudala baya kuyifumana intswelo. Nangona sicacile ukuba zonke iinkampani zineendawo ezithile ezigcinwe kwezi chips, ziya kupheliswa ukuba kukho imfuno enamandla.
Ingxaki yehlabathi kwaye ngenxa yeso sizathu kanye, uMongameli uJoe Biden ngokwakhe uqaphele umzamo ukomeleza imveliso yeemiconductor zaseMelika kunye nokomeleza unikezelo lwamazwe aphesheya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ukunqongophala kwe-chip kuya kuhlala ubuncinci kude kube phakathi ku-2022.